Jikadayada cusub cabbirkeedu wuu labanlaabmayaa waxana uu leeyahay cunto kariye cusub - Cunnooyinka Taayirada
Jikadayadeenna cusub cabbir ahaan way labanlaabantahay oo waxay leedahay kuug cusub
Waxyaabo waawayn ayaa ka dhacaya Cunnooyinka Dufanada Jikada ee Fursadaha, oo la furay bishii Maarso iyada oo ah kijinkii ugu horreeyay ee maxalliga ah ee loogu talagalay u adeegidda Cunnooyinka Cunnooyinka Twin Wheels.
Bilowga sanadka 2018, Jikada Fursadaha ayaa laba jibaari doonta tirada cuntada ee ay u adeegto, min 500 ilaa 1,100. Ballaadhintani waxay ku soo beegmaysaa iyadoo dhammaan degmooyinkeenna Ramsey siddeed goobood oo deris ah ay bilaabeen inay cunno ka siiyaan jikada cusub. Waxay ku biiraan Cunnooyinka Adeegga Degdegga ah ee Bulshada ee Wheels (Minneapolis), Cuntooyinka Cafiska ee Wheels (Brooklyn Park iyo Brooklyn Center) iyo Cuntada Moobaylka ee Waqooyiga Dakota County (South St. Paul, West St. Paul, Inver Grove Heights, Mendota Heights), the goobaha xaafadaha oo horeyba ugu jiray cunno jikada cusub.
Himilada Jikada ee Fursadaha waa mid fudud: in la siiyo cunnooyinka ugu tayada sarreeya kuwa la qaata Cuntada Gawaarida qiimaha ugu hooseeya ee suurtogalka ah. Cuntada Wheels ayaa qandaraas la leh Fur hubka ee Minnesota soo-saarista cuntooyinka, maadaama ay leeyihiin taariikh hodan ah oo ah inay siiyaan cunno dhadhamin weyn dadka qaba HIV iyo cudurrada kale ee nolosha halista ku ah. Shaqaalaha cunnada ee jikada Fursadaha waxay diirada saaraan adeegsiga maaddooyinka cusub iyo habka cuntada laga soo bilaabo-xoqidda markasta oo ay macquul tahay.
Iyo hoos u dhigida qiimaha cuntada, waxay ka dhigan tahay in lacag badan la heli karo si looga caawiyo helitaanka helitaanka cuntada ee kuwa ugu baahi badan.
La kulan jikada Fursadaha 'kuugga cusub
Waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno Michelle Spieker oo ah kuugga cusub ee Jikada Fursadaha! Michelle waxay ka shaqeyneysay warshadaha cuntada muddo 11 sano ah waxayna u timid Jikada Fursadaha ka dib markii ay meheradeeda ku xirtay dhowr maqaaxiyo oo waaweyn oo mataano ah, oo ay ku jiraan Ox Cart Ale House iyo Pajarito oo ku yaal St. Paul. Michelle waxay ku biirtay Jikada Fursadaha iyada oo ah cunto kariye bishii Maarso ka hor intaan dhowaan loo darin kuugga.
Michelle waxay sheegtay inay uga soo booday fursada ay kaga shaqeyn karto Jikada Fursadaha maxaa yeelay waxay si qoto dheer u xiiseyneysaa inay adeegsato xirfadaheeda si ay uga caawiso yareynta kala duwanaanshaha caafimaad ee ay sababtay helitaanka nafaqada saxda ah. Waxay sidoo kale qiimeysaa fursadda ay saameyn ugu yeelan karto nolosha dadka iyada oo dhiiri gelinaysa farxadda la socota cuntada wanaagsan.
“Waxaan qabanaa waxyaabo badan oo aan u aragno in guryaha lagu kariyo,” ayay tiri Michelle. In kasta oo inta badan diiradda la saarayo waxyaabaha la jecel yahay sida hilibka hilibka ama hilibka digaagga, Michelle waxay sheegtay inay jirto qiimo la siinayo noocyo kala duwan si ay cuntadu u noqoto mid xiiso leh. Bishii la soo dhaafay, tusaale ahaan, digaagga digaagga ayaa ahaa wax cusub oo lagu daray menu-ka.
Waxaan jecel nahay inaan tijaabino biyaha si aan u aragno waxa dadku ku jiraan, ayay tiri Michelle. Jikada Fursadaha ayaa markaa adeegsaneysa jawaab celin ka heleysa qaatayaasha qorshaheeda menu.
Waad ku qaban kartaa Michelle ficil ahaan waxaadna uheli kartaa cunto karis aad u wanaagsan digaagga Cordon Bleu, maadaama ay dhowaan ku biirtay KARE11 qayb ka mid ah istuudiyaha wax lagu karsado.
Ballaarinta suurtagalnimada taageerada deeq-bixiyeyaasha
Midkoodna ballaadhintan ugu dambaysay, ama Cunnada Jikada Dhirta Fursadaha, suurtagal noqon mayso haddii aanad caawimaad ka helin inbadan oo idinka mid ah oo taageero dhaqaale siiya Cuntada Lugaha.
Waxaan si gaar ah ugu mahadcelineynaa qof kasta oo naga caawiyey la kulankayaga Sii ilaa Maalinta ugu Badan ujeedada ah uruurinta lacag ku filan oo lagu taageerayo soo iibinta gaari cusub oo geyn ah. Baabuurkaas cusub ayaa loo baahan yahay si cunnada loogu geeyo goobaha cusub ee xaafadaha loogu geeyo degmada Ramsey.
Iyada oo $26,443 loogu deeqay Sii Maalintii ugu badnayd oo lagu daray $25,350 hadiyad u dhiganta oo ka timid koox deeqsi ah oo deeq-bixiyeyaal ah, wadar ahaan $51,793 ayaa la aruuriyay - oo ku filan in lagu daboolo iibsashada gaari cusub oo geyn ah iyo wax yar taageer waayeelka baahan. Waad ku mahadsan tahay qof kasta oo naga caawiyey inaan la kulanno himiladdan hami leh!
Nofeembar 21, 2017